merolagani - लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एनएलजीले डाक्यो साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले?
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एनएलजीले डाक्यो साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले?
Oct 22, 2020 07:19 AM Merolagani
एनएलजी इन्स्योरेन्स (NLG) ले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न मंसिर ५ गते १४ औँ वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने भएको छ। सो सभा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, पानीपोखरी, काठमाडौँमा बिहान १० बजेदेखि वेबिनार मार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँको ७ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। यसका साथै, बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ ०.३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ।
साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ इन्स्योरेन्सले कात्तिक २५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ। यस अनुसार कात्तिक २४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
डिप्रोक्स लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा, यी प्रस्ताव हुँदैछन् पारित
Sep 19, 2021 09:58 AM
अपर तामाकोशीले एकैपटक डाक्यो दुई आर्थिक वर्षको साधारण सभा
Sep 13, 2021 07:54 AM
लाभांश पारित गर्न नेपाल ल्युव आयलको साधारण सभा आह्वान, कति दिँदैछ लाभांश?
Sep 12, 2021 08:34 AM
सानिमा माई हाइड्रोपावरले प्रस्ताव गर्यो लाभांश, कार्तिक ७ गते साधारणसभा
गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभाको मिति तय